मधुमेहका बिरामीले कति खाने आँप ?
२०७९ असार ६ सोमबार ११:१६:००
मौसमअनुकूल फलफूल सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ । तर, कतिपयले आफ्नो स्वास्थ्य समस्याका कारण कुन फलफूल खान हुने र कुन नहुने भनेर थाहा नपाउन सक्छन् । यस्तो वेलामा चिकित्सकको परामर्श आवश्यक पर्न सक्छ ।
यो सिजन फलफूलको राजा भनिने आँपको सिजन हो । आँप स्वादिलो त हुन्छ नै यसबाट शरीरलाई आवश्यक पोषकतत्व पनि मिल्छ । शरीरलाई चाहिने खनिज, भिटामिन ए, भिटामिन बी, पानी, पोटासियम, क्याल्सियमलगायत । तर, कतिपय व्यक्तिले सुगरका बिरामीले आँप खानुहुँदैन भन्ने गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा नयाँ पत्रिकाका विवेक पोखरेलले भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छन् ।
मधुमेहका बिरामीहरूलाई एकै सिजनमा पाइने धैरै फलफूलमध्ये एउटा मात्रै सेवन गर्न अनुरोध गर्छु । आँप बढी क्यालोरी भएको फलफूल हो । त्यसकारण, सुगरका बिरामीले आँप खाएको दिनमा अन्य फलफूल नखाँदा राम्रो हुन्छ ।
जीवनशैली, रहनसहन, सन्तुलित आहार र औषधिको नियमित सेवन छ भने खान नहुने भन्ने होइन । तर, आँप खाइन्छ भने अरू क्यारोरी पाइने, कार्बोहाइड्रेट अर्थात् सुगर बढाउने खानेकुरा सेवन गर्नुहुँदैन भन्ने हो । स्याउ, सुन्तला, मेवा, केरा, आँप मिलाएर खान पनि सकिन्छ । सुगरको लेवलअनुसार दिनमा कति आँप खाने भन्ने पनि छ । दुई सयभन्दा कम ब्लडसुगर भएका बिरामीले दिनको एउटा आँप खाँदा हुन्छ, तर बढी छ भने एउटाको आधा मात्र खानुपर्छ । त्योबाहेक अन्य फलफूल खाने हो भने मात्र घटाउनुपर्छ ।
एउटा आँपमा एक सयदेखि दुई सयसम्म क्यालोरी हुन्छ । एउटा सुगरका बिरामीले १८ सयदेखि दुई हजारसम्मको क्यालोरी बढीमा लिन सक्छ । आँप खाएर सुगर बिग्रिने भन्ने होइन । कति मात्रा खाने भन्ने मुख्य कुरा हो । चाहिनेभन्दा बढी खानु भएन ।
#आँप # मधुमेह
आँपचौरमा सहिद पार्क बन्दै, कफी क्षेत्रको प्रचारसँगै पर्यटनमा जोड
गुल्मीको आँपचौर स्वास्थ्यचौकी नयाँ भवनमा
नौ वर्षीया बालिका हत्या प्रकरण : आँपको प्रलोभन दिएर करणी प्रयास, इन्कार गर्दा हत्या